पाल्पा तान्सेनको ‘सन्तोष चलचित्र मन्दिर’ पनि सँधैका लागि बन्द! « News24 : Premium News Channel
पाल्पा तान्सेनको ‘सन्तोष चलचित्र मन्दिर’ पनि सँधैका लागि बन्द!
काठमाडौं । कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण सबै भन्दा बढी फिल्म क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । प्राणघातक कोरोना महामारीका कारण करिब डेढ वर्षदेखि मुलुकभरका सम्पूर्ण फिल्म हलहरु बन्द छन् ।
तर, पछिल्लो समय आएर केही फिल्महरुहरु भने सँधैका लागि बन्द भएका छन् । केही समय अगाडि मात्रै जय नेपाल हल, कुमारी हललगायत सँधैका लागि बन्द गरिएको सञ्चालकहरुले जानकारी गराइएका थिए । यसैबीच मोफसलका फिल्म हलहरु पनि सँधैका लागि बन्द हुन थालेका छन् ।
विगत एक दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको पाल्पा तान्सेनको एक मात्र फिल्म हल ‘सन्तोष चलचित्र मन्दिर’ पनि सँधैका लागि बन्द गरिएको छ । वि.सं. २०३८ सालमा स्थापना गरिएको यस हलमा गाउँ–गाउँबाट फिल्म हेर्ने दर्शकहरुको बाक्लो भीड लाग्दथ्यो ।
टिकट समेत नपाएर दर्शकहरु फर्किने गरेको उक्त हलमा पछिल्ला केही वर्षयता दर्शकको संख्या घट्दै गएको थियो । साथै, कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि हल ठप्प भएको अवस्थामा सञ्चालकले हललाई सँधैका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उक्त हल २०७६ चैतमा लकडाउन भएसँगै बन्द भएको थियो ।